‘काठमाण्डाैंमै जहाँ बस चढ्न हिउँद कुर्नुपर्छ’
शंखरापुुर नगरपालिकाको नाङ्लेभारे अझै पनि विकासमा निकै पछि परेको छ। यहाँको पटाप र छापभञ्ज्याङ तामाङ बस्तीका बाहुल्य रहेको बस्ती हो। यहाँका बासिन्दाले सहजरुपमा यातायात सेवा पाउन सकेका छैनन्। यस्तै, स...
दसैं–तिहार नजिकिँदै आए। विभिन्न कामले राजधानी काठमाडौं बस्दै आएका मानिसलाई वर्ष दिनमा आउने पर्व मनाउन पुर्ख्याैली घर फर्कन हतारो छ। राजधानी काठमाडौंबाट बाहिरिने र त्यहाँ छिर्ने मुख्य नाका नौबिसे–नागढ...
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) का पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठसहित ११ जना पक्राउ परेका छन । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले कमसल धितोमा साढे चार करोड रूपैयाँ ऋण प...
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सरकार र पार्टी अघि बढिरहेको स्पष्ट पारेका छन । थारु समुदायको जितिया पर्वमा सहभागी हुन सुनसरी पुगेका ...
कार्ल मार्क्स द्वीसतवार्षिकीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको 'सी जिनपिङ विचारधारा र बिआरआई' विषयक विचार गोष्ठीमा 'चीनबाट नेपालले के सिक्ने ?' भन्ने सवालमा प्रकाश पार्दै पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे...
काठमाडौं । वैदिक सनातन धर्ममा पूजापाठ र हवनयज्ञको विशेष महत्व छ । कुनै पनि शुभ कार्यमा हवन गर्नु आवश्यक मानिन्छ । हवन गर्दा ‘स्वाहा’ शब्द उच्चारण गरिन्छ । किन यसो गरिएको हो ? आउनुस् यसको चर्चा गरौं । ...
काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको आगामी नेपाल भ्रमणलाई केन्द्रमा राखेर अर्का एकजना उच्च चिनियाँ अधिकारी भोलि(सोमबार) नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख वि...
बाढीमा परि दुई बालिका वेपता
म्याग्दी । शनिबार रातीको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीमा परि दुई बालिका वेपत्ता भएका छन । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका वडा नं २ बगरफाँटको कोटखोलामा आएको बाढीले बगाउँदा दुई बालिका बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता ...
जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी, सार्वजनिक शौचालय ३८ वटा । एउटा शौचालय ७९ हजारले प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, 'काठमाडौंमा बसाईसराइ र जनसंख्या वृद्ध...